Kanzuru yeHarare yatanga kubhadharisa vagari mari yemvura nemimwe mitero nemadhora ekuAmerica zvichitevera kupihwa kwayakaitwa mvumo yekuita izvi nehurumende.
Sangano rinomirira maguta nemadhorobha munyka reUrban Councils Association of Zimbabwe, kana kuti UCAZ, ranyorerawo kuhurumende richtsvaga mvumo yekuti maguta nemadhorobha ese munyika abhadharise vagari mari nemadhora ekuAmerica.
Hurumende yakapa kanzuru yeHarare mvumo yekubhadharisa vagari nemakambani vachishandia madhora ekuAmerica kutanga mwedzi uno.
Mutauriri wekanzuru yeHarare, VaMichaeil Chideme, vaudza Studio 7 kuti vasingakwanise mari yekunze vacharamba vachishandisa mari yemuno, asi inenge yakatarwa ichienzaniswa nedhora rekuAmerica.
Mamwe maguta akaita seMasvingo, Kwekwe neRedcliff akaitawo zvisungo zvekuti vanokwanisa vabhadhare mitero vachishandisa madhora ekuAmerica.
Mutungamiriri weUrban Councils Association of Zimbabwe, zvakare mari meya weGweru, VaJosiah Makombe, vaudza Studio 7 kuti vakatonyorera kugurukota rinoona nezvemadhorobha nematunhu, VaJuly Moyo, vachikumbira mvumo yekuti maguta nemadhorabha ese munyika makumi matatu nemaviri abvimidzwe kubhadharisa mitero nemvura nemadhorobha ekuAmerica.
VaMakombe vati maguta nemadhorobha ange ave kutatarika kuita basa ravo sezvo vese vanovatengesera zvinhu zvekushandisa zvakaita semishonga yekuchenesa mvura vave kutengesa nemari yekunze.
Vati kubhadharisa mari yekunze kunoita kuti makanzuru akwanise kuita basa ravo zvakanaka asingapedzi nguva ari mumitsetse yekutsvaga mari yekunze kubva kuReserve Bank of Zimbabwe.
Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare, reHarare Residents Association, VaPrecious Shumba, vaudza Studio7 kuti vanotambira danho rekubhadharisa mitero nemari yekunze vachiti zvinoita kuti makunzuru aya asagare achishandura mitero nekuda kwekushaya simba kunogara kuchiita mari yemuno.
VaShumba vaenderera mberi vachiti danho iri rinoita kuti maguta nemadhorobha asagare achikumbira mari kuReserve Banj nehurumende.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano rreCommunity Water Alliance, VaHardlife Mudzingwa, vaudza Studio 7 kunyange hazvo iri riri danho rakanaka uye richikwanisa kuvandudza mabasa emakanzuru, dambudziko guru nderekuti vagari nevashandi vakawanda munyika vari kutambira mari yemuno, izvo zvichanetsa kuti vawane mari yekunze iyi.
Mukuru wesangano reMasvingo United Residents and Ratepayers Association, VaAnoziva Muguti, vaudza Studio 7 kuti danho rekushandisa mari yekunze rakanaka chose uye chinofadza ndechekuti vasingawane marii iyi havasi kumanikidzwa kubhadhara nemari yekunze, sezvo vachibhadhariswa mari yemunyika asi yakatarwa nemutengo wedhora rekuAmerica.
Hatina kukwanisa kubata VaJuly Moyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
Mumwe mushandi mukuru mubazi ravo uyo asina kuda kudomwa nezita, audza Studio 7 kuti VaMoyo vachapindurachikumbiro cheUCAZ, nguva ipi zvayo kubva pari zvino.
Hurumende yadzika mutemo unobvumidza vemabhizimisi bhadharisa vatengi nemari yekunze neyemuno, kana kuti Dual Pricing System, asi haina kunge yapa makanzuru mvumo yekuita izvi.